6-daan Caado Markaad Guursato Ka Dib aad uga dheeraaw | Gaaloos.com
Home » galmada » 6-daan Caado Markaad Guursato Ka Dib aad uga dheeraaw
6-daan Caado Markaad Guursato Ka Dib aad uga dheeraaw
Si aad ugu raaxeysato noloshaada cusub ee xaaslaha ah uu sana mashaakil kuugu imaanin iyo qilaaf waa inaad ka fogaataa caadooyinkaan soo socda.
Inaad la haasaawdo naag kale: Waa arinta ugu badan ay ka caroodaan dumarka kana maseeraan.
Waa inaad yareysaa daawashada cayaaraha: Hadii aad ahayd mid ku dhameysata waqtigiyada firaaqada uu leyahay TV-ga iyo in uu cayaaro geemka waxaa muhiim ah haadii aad guursato in aad ku xisaabtanto waqtigaaga maxaa yeelay xaaskaaga waxay u baahan tahay in badan oo waqtigaaga ah.
In aad ka dheeraato oo aad yareyso asxaabtaada: Waxba kama qabto xaaskaaga hadii aad la kulanto saaxiibadaa isbuucii hal jeer laakiin hadii uu soo laalaabto kulamada saxiibadaada xaaskaaga waxay u tahay dhibaato wayn.
Inaad ka ilaaliso gurigaaga wax walbo oo dhib ah: Dumarka badan kood waxay amin san yihiin gurigeeda in uu yahay hantideeda qaaska ah ayna waajib tahay in ay ilaalsato hadii ay tahay nadaafada iyo maamul kaba sidaa dartee waxaa haboon in aad la qabsato nolosha cusub.
Gurigaaga ma ahan maqaayadaada cusub: Xaaskaaga waxay kaaga baahan tahay in aad kaalmeyso in badan hadii aad tahay mid caadeystay hadii aad tahay mid mar walba raasinka fadhigiisa loogu keeni jiray oo amar badan waa inaad iska iloowdaa dhaqankaas.
La dhaqanka waa mas’uuliyada ugu badan: Badanaa wuxuu aminsan yahay ninka markuu doobka yahay in hooyadiis ay u suubiso waxyaabaha daruuriga uu doonayo laakiin guurka ka dib ku fikir in aysan hooyadaa wax kuu hagaajineynin ay xaaskaaga kuu hagaajineyso wax walbo oo aad u baahan tahay.
Title: 6-daan Caado Markaad Guursato Ka Dib aad uga dheeraaw
Posted by galmada Net, Published at 2:00 AM and have 0 comments